Mahrez oo ku dhashay Faransiiska, xiddigaha isku kooxda soo noqday, kuwa qarammada wadaaga & Saaxiibada uu caawa kulmin doono kulanka Man City & PSG – Gool FM
(Manchester) 04 Maajo 2021. Kooxaha Manchester City iyo Paris Saint-Germain ayaa caawa kulanka lugta labaad ee siddeed dhammaadka Champions League ku wada ciyaari doona Magaalada Manchester ee dalka England.
Kulankii lugta hore ee Semi-final ee lagu ciyaaray Magaalada Paris ayaa waxa ay kooxda reer England ee Man City ku soo adkaatay 2-1, xilli PSG kulankaas kaarka cas laga qaatay, waxaana kooxda reer France ay caawa doonaysaa inay natiijada kulankaasi dhinaca kale u rogto si ay sanadkeedii labaad oo xiriir ah u gaarto Final-ka UEFA Champions League.
Ciyaartan ayaa kulminaysa xiddigo hore isu wajahay iyagoo kooxo kala duwan u ciyaaraya, kuwo hal koox u soo wada ciyaaray iyo kuwo wadaaga qolka labiska ee qarankooda.
Saaxiibada uu kulmin doono kulanka caawa ee Man City iyo PSG halkaan hoose ka eeg:-
>- Pochettino iyo Guardiola ayaa midba midka kale wajahaya markii 19-aad, iyagoo iska hor yimid markii kala wateen Espanyol, Tottenham iyo Paris & Barcelona iyo Man City, macallinka haatan ee Paris ayaana guuleystay kaliya saddex kulan, halka 11 guul uu gaaray tababare Pep Guardiola.
>- Kooxdii Pochettino ee Tottenham ayaa garaacday Naadiga Guardiola ee Man City wareegga siddeed dhammaadka UEFA Champions League ee xilli ciyaareedkii 2018/19, iyagoo kulankii ka dhacay garoonkooda ay Spurs ku adkaatay 1-0, halka kulankii kalena 4-3 ku adkaatay Man City sidaasna Tottenham ayaa goolashii ay dhalisay iyadoo martida ah ku soo gudubtay.
>- Mahrez wuxuu ku dhashay Sarcelles oo ah xaafad ka mid ah Paris, wuxuuna u ciyaaray Kooxda reer France ee Quimper fasal ciyaareedkii 2009/10) iyo kooxda Ligue 2 ee Le Havre oo ah isagoo xirfadle sare ah uu u dheelayey 2010 illaa 2014 ka hor inta uusan u soo dhaqaaqin England.
Xiddiga ka soo ciyaaray dalka France:-
• Aymeric Laporte waxa uu ku dhashay Agen oo ku taal koonfurta-galbeed Faransiiska, laakiin kaddib markii uu la ciyaaray kooxaha maxaliga ah SU Agen (2000-09) iyo Bayonne (2009/10), waxa uu u dhaqaaqay dalka Spain, isagoo jira 16-sano si uu ula midoobo Kooxda Athletic Club sanadkii 2010.
Xiddiga ka soo ciyaaray dalka England:-
• Pochettino ayaa Kyle Walker tababare ugu soo ahaa kooxda Tottenham intii u dhexeysay sanadihii 2014 illaa 2017, markaasoo daafacan uu ku biiray Manchester City.
Ciyaartoyda isku koox u soo wada ciyaaray ee caawa kulankan uu kulmin doono:-
• 1-dii bishii Agoosto sanadkii 2020, Danilo oo ka tirsanaa Porto ayaa garaacay Kooxda Benfica oo uu markaas ka mid ahaa Rúben Dias kulan ku dhammaaday 2-1 oo ahaa Final-ka Portuguese Cup, kaasoo ka dhacay Coimbra.
Xiddigaha isku qaranka ah:-
• Mbappé ayaa dhaliyay labo gool markii xulkiisa France uu 4-3 ku garaacay Argentina wareegga 16-ka ee tartankii Koobka Adduunka ee 2018, Agüero isna waxa uu helay mid ka mid ah goolashii uu dhaliyey xulka ka socday Koonfurta Ameerika.
RASMI: 10 Kooxood oo xaqiijiyey inay u soo baxeen tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedka soo socda... (Miyey ka mid tahay kooxdaada?)